Shaqo-raadis | Samfunnskunnskap.no
Inkasta oo ay shaqo la’aantu Norwey hooseyso, waxa jiri kara tartan adag oo loo galo shaqooyinka bannaan. Qofka shaqo rabaa waa inuu noqodo mid firfircoon. Waa muhiin in la isticmaalo dadka aad taqaano iyo shabakada aad ku xidhan tahay, oo la muujiyo in shaqada la xiiseynayo. Shaqooyin badan ayaa la soo geliyaa ineternetka iyo wargeysyada.
Marka la arko shaqo la rabay, waa in la qoro codsi oo la soo gudbiyo cv. CV waa in uu sheegayaa qofka aad tahay, aqoonta aad leedahay iyo wixii aad soo qabatay. Waa muhiim in waqti fiican in la qoro codsi fiican si aad laga yaabee uu kuugu yeedho shaqobixiyuhu waraysi-shaqo (intervju).
Ka hor intaan wareysiga la tegin waa in si fiican loo sii diyaargaroobo. Waa in la helo macluuumaad shirkada ku saabsan. Waxa laga yaabaa in macluumaadka shirkada ku saabsan internetka laga helo, ama laga yaabaa waydiiso cid taqaana shirkada?
Waa in sidoo kale laga fekero sida looga jawaabayo su’aalo kale duwan. Muxuu shaqebixiyuhu ku weydiin doonaa? Maxaa laga jawaabayaa?
Arji-shaqo wuxu ka kooban yahay:
wax kooban ku saabsan adiga iyo waxa aad qabato hadda
wax kooban oo ku saabsan sooyaalkaaga
sababta aad shaqada ugu habboon tahay
Waa caadi in lagu xereeyo arjiyada elektarooni ahaan internetka ama e-mail.
CV waa dukumenti leh qoraal kooban oo sheegaya milicsiga waxbarashada iyo khibrada shaqadaada. CV wuxu ka kooban yahay qoddobadan:
Macluumaad kale oo kugu saabsan adiga
Talo ku saabsan waraysiga shaqo
Waqti fiican bax marka aad leedahey ballan wareysi shaqo. Hubi meesha shirkadu ku taallo, iyo sida aad ku tegi karto goobtaas.
Ka feker nooca dharka aad xidhaneyso adigu iyo muuqaalka aad muujineyso.
Gacanqaad fiican iyo in qofka oo si fiican indhihiinnu isu qabtaan waa muhiim.
Si fiican u feker, dhoolo cadee oo isku dey inaad si fiican u fiiriso dadka wareysiga kaa qaadaya.